ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း: Amy DeLouise | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း: Amy DeLouise
မေီ DeLouise (အရင်းအမြစ်: ယောသပ်သည် DiBlasi)
2019 NAB ပြရန် နယူးယောက် Profiles ယခုနှစ်အတွက်ပါဝင်ပါလိမ့်မည်သူအသံလွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးတစ်ခုစီးရီးများမှာ NAB ပြရန် နယူးယောက် (အောက်တိုဘာ 16-17) ။
မေီ DeLouise အလွန်လေးစားဖွယ်နှင့် In-ဝယ်လိုအားစပီကာ, စာရေးဆရာ, ပုံပြင် Teller နှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါမကြာသေးမီကသူမ၏အင်တာဗျူးနှင့်အလွန်အစအဦးနှင့်အတူစတင်, သူမ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ဘက်စုံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင် Biz သို့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး entree ကျနော်တို့ကွန်ယက်ကိုတနာရီကြာတီဗီအထူးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်, ငါသည် b-လိပ်ရိုက်ကူး logging ခဲ့သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တည်းဖြတ်တည်းဖြတ်မူများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှိ၏။ ကျနော်တို့ကအနုပညာရှင် On-ကင်မရာအိမ်ရှင်နှင့်အတူရိုက်ကူးဖို့တစျခုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုခဲ့ပေမယ့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးခံရဖို့လိုအပ်, လူတိုင်းတစ်ဦးထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်ညွှန်းအဆုတ်ရောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းငါ့ကိုကြည့်ရှုနှင့်သင်ယေးလ်မှာအင်္ဂလိပ်ကအဓိကမဟုတ်ကြ '' ဟုမေးသော်, သင်ကရေးပါ။ '' ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံး On-screen ကိုအရေးအသားကရက်ဒစ်တယ်ဘယ်လောက်ပါပဲ။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်မဇာတ်ညွှန်းအဖြစ် freelancing စတင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မအတော်ကြာအဓိကရုပ်ရှင်နှင့်ကြော်ငြာ၏တည်နေရာဌာနအပါအဝင်ဥပဒေကြမ်းများ, ဆပ်ဖို့ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်။ ငါကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ရိုက်ချက်ချွတ်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြာအပေါငျးတို့သထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဂီယာသိတယ်သောသူတို့အားအလုပ်အကိုင်များ-လူတွေအပေါ်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အပြစ်တွေကနေသိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအရင်ဖျော်ဖြေကနေသင်ခန်းစာတွေကိုသငျသညျမိမိတို့တင်ပြသည့်အခါအခွင့်အလမ်းများကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်, နှင့်အစဉ်မပြတ်မှော် screen ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ဖြစ်စေခြင်းငှါကြိုးစားအားထုတ်အတွက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းခဲ့ကြသည်ပုံပါဘဲ။ သငျသညျ 14 နာရီရက်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အခါလည်း, တကယ့်လူတို့ကိုကျွေးမွေးရန်ကူညီပေးသည်။ "
DeLouise Archive ပုံရိပ်တွေနှင့်သမိုင်းနောက်ခံသုတေသနအပေါ်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဗွေဆော်ကျွမ်းကျင်သူတဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ကျွန်မသူမ၏ဤရှုထောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုသူမ၏မေးသော် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး. "ကျွန်မနေတဲ့အထူးသဖြင့်ကောင်းသောသမိုင်းကျောင်းသားဘယ်တော့မှခဲ့သည်" ဟုသူမကရှင်းပြခဲ့သည် "ထိုအခါမူကားငါအနုပညာသမိုင်းတွင်သင်တန်းကို ယူ. မေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုရှိခဲ့သည်! ဒါကြောင့်ငါအမြင်အာရုံသင်ယူသူခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်လိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်အဖြစ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အတအစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အ 1970s ဖန်ဆင်းဖိနပ် running အမျိုးအစားထဲမှာ Anti-ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲဆန္ဒပြပွဲများ, တရုတ်အတွက်ထင်ရသောလူထုကိုမြင်ကွင်းများ-ping ရဲ့ Pong ပြိုင်ပွဲတစ်ရှည်လျားသောစာရင်းသုတေသန။ ဒါကနည်းနည်းရုပ်ရှင်အော်စကာရုပ်ရှင်ဖြစ်ထွက်လှည့် ဖောရက်စ Gump။ ငါ၏အသုတေသနနှင့်မြင်လျှင်, သင်တန်း၏, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘဝမှများစွာသောအခြား-လာလူများတဲ့မှော်အတှေ့အကွုံ, ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ကွေ့အချက်ပါပဲ။ "
ဒါဟာ DeLouise သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်အောင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဤကာလအတွင်းခဲ့သည်။ "ငါသည်မှာ Oliver ကျောက်ခေတ်ရဲ့ရုပ်ရှင်အပေါ်တည်နေရာဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် တွေအတိုင်း။ သူတို့ကတစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခု၏နောက်ခံများအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေဒီ၏အဓိကဓါတ်ပုံကိုပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီမံကိန်းတွေအပေါ်မှာငါ့အလုပ်ကနေကျနော်တွေ့နှင့်အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်တစ်ဦးမိတ္တူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရာသိတယ်။ အိုလီဗာပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်၏အနုပညာဦးစီးဌာနအတွက်သုတေသနလက်ထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ငါ့ကိုငှါးသ, နစ်ဆင်။ ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာဗစ်တာ Kempster အသေးစိတ်များအတွက် stickler ကြီးနဲ့ကျွန်မသူ့ထံမှဤမျှလောက်သင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကြောင်းအလုပ်လုပ်များ၏သင်ရိုးနှင့်အခြားကြီးမားသော ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်, ကျနော်တို့ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြသည်ကို 'အစစ်အမှန်ကလူ' 'ပုံပြင်များငါအမှန်တကယ်ပါဆုံးပျော်မွေ့သူများဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ အဆိုပါမရှိမဖြစ်ပုံပြင်ကို arc အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်တစ်ဦး doc-စတိုင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ငါအမှန်တကယ်ကလူပုံပြင်များစိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်နည်းတူဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှာပါ။ "
ငါရာသက်ပန်တီဗီစှဲလမျးသူအဖြစ်ကျွန်မအမျိုးသမီးတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအထီးကြီးစိုးလျက်ရှိသည်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လန်းဆန်းသောလူကြိုက်များတဲ့တီဗီစီးရီးဇာတ်လမ်းတွဲပေါ်တွင်စာရေးဆရာများနှင့်ဒါရိုက်တာများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြည့်ဖို့က ပို. ဘုံယနေ့ခေတ်ရှာတွေ့သော DeLouise မှဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့် ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်သူမ၏မေးတယ်။ "သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးခရက်ဒစ်၏အတော်များများကသူတို့ပေါ်လာလိုသည့်အတွက်ပုံပြင်များငွေကြေးနှင့်ဖန်တီးဖို့နောက်ဆုံးတော့နိုင်ခဲ့အမျိုးသမီးတွေသရုပ်ဆောင်များကိုဖြစ်ကြသည်။ သူမ၏အသစ်နှင့်အလွပြပွဲများတွင်ဥပမာအားဖြင့်, Kirsten Dunst ဗဟိုဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင့ဖြစ်လာလုပ်နည်း Showtime, ဒါမှမဟုတ်နီကိုးလ် Kidman နှင့် Reese Witherspoon ဖန်တီးအထိ teaming များအတွက် Big Little ကမုသာ HBO ၏။ သို့သော်စီမံကိန်းများသူတို့အားမျိုး bankroll နိုင်သူတို့ရဲ့အရပ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမိန်းမသည်, သူတို့တစ်တွေ shoestring ဘတ်ဂျက်အပေါ်စေရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကြီးမြတ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူပိုပြီးထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဝေမျှမယ်များကဲ့သို့အရေးကြီးသောအားထုတ်မှု Sundance နဲ့ Meryl Streep ၏ The စာရေးဆရာရဲ့ Lab ကမှာ Screen ကိုနေသော်လည်းငွေကြေးထောက်ပံ့ရကြောင်းဇာတ်လမ်းတွေဖန်တီးလွန်းအနည်းငယ်အမျိုးသမီးတွေနေဆဲရှိပါတယ်။ က DPS, အသံဌာနအတွက် gaffers, အိမ်မှာရှိနေတဲ့, DITs, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်တေးရေးအဖြစ်ကင်မရာနောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီးတွေကိုမှကြွလာသောအခါအကြှနျုပျကိုစတင်ရန်ကြပါဘူး။ သူများသည်နံပါတ်များတစ်ခုတည်းဂဏန်းရာခိုင်နှုန်း၌ရှိကြ၏။ သငျသညျရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏လေ့လာမှုအဘို့အ San Diego မှပြည်နယ်ရဲ့စင်တာမှအားလုံးအသေးစိတ်ရနိုင်သည်။ ဒီတော့ yeah, ငါတို့သွားရမယ့်တာရှည်လမ်းရှိသည်။ သတငျးကောငျးကိုသစ်ကိုတတ်နိုင်ကင်မရာများနှင့် NLEs ဂီယာဖမ်းပြီးလုပ်သွားရမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပြောပြရန်လိုသူမည်သူမဆိုအဘို့အဖြစ်နိုင်စေကြောင်းဖြစ်၏။ "
ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပြောနေတာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး စက်မှုလုပ်ငန်း DeLouise ရဲ့ကိုယ်ပိုင် GalsNGear အစီအစဉ်ယုတ္တိနည်းအဦးဆောင်ခဲ့သည်။ "ငါသည် created #GALSNGEAR အမြိုးသမီးမြားသခြောကိုကူညီတဲ့ pop-up ဖြစ်ရပ်ပိုကောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညီလာခံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များမှာစပီကာအဖြစ်ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြသည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးအပါဆုံးဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအခွင့်အလမ်းများအချို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိုင်းကျား, မဝိသေသလက္ခဏာများ၏လူဦးကြိုဆိုကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသော-အထီးပြားကိုမြင်လျှင်စောင့်ရှောက်လျှင်, သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ဦး panel ကိုအပေါ်တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးရှာသော်လည်းငါသည်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနေသောဤမျှလောက်များစွာသောမိန်းမတို့သည်ကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်ငါသိတယ်လူတိုင်းထွက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး, သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်ထွက်ရောက်ရှိဖို့သူတို့ကိုမေးလျှင်, ငါတို့သည်ယခုအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာ, အယ်ဒီတာများ, DPS, စက်ရုံမန်နေဂျာများ, အသံအင်ဂျင်နီယာများ, အသံရောနှော၏ကွန်ယက်များ အထူးသက်ရောက်မှုများ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပြောဆိုဝေမျှဖို့မရရှိနိုင်နေသောအနုပညာရှင်များ, သင်ကအမည်။ ကျနော်တို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်စတင် NAB ပြရန် ထိုသို့အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်များ networking အိမ်ရှင်ပြား, နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပို့လိုက်ကြတယ်နှင့်ကဲ့သို့သောအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်ထံမှထောက်ခံမှုဆည်းပူးခဲ့ကြ Blackmagic ဒီဇိုင်း, Adobe ကအနည်းငယ်အမည်ကိုမှထုတ်လွှင့်ဘိ, Fox က Fury Lighting, ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်နှင့် Dell ။ ငါတို့သည်လည်းငါ၏အဒေသခံမျြးအခနျးကွီးသောအရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် & ဗီဒီယို, DC, အမျိုးသမီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတနာများကနေကြီးမားတဲ့ထောက်ခံမှုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်တဲ့ professional ညီလာခံသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ရှိခြင်းမည်သူမဆို slot နှစ်ခုစကားပြောမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းအတွက်တက်ရောက်ခြင်းအမျိုးသမီးတွေများများနှင့်ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်၏။ "
DeLouise ဒီနှစ်မှာ ", ဗီဒီယိုအဘို့အရေး" "နောက်လအဆင့်သင်၏ Freelance စီးပွားရေးတည်ဆောက်ခြင်း" နှင့်နှစ်ဦးတင်ပြချက်များပို့ချပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် နယူးယောက်။ ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလားမှာ | "ငါသည် Post ကိုမှာစပီကာဖူး NAB ပြရန် ယခုဖြစ်ကောင်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခု, oh, အဘို့။ NAB ပြရန် တစ်ဦး Premiere စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လက်လွတ်မလိမ့်မည်။ ဒါဟာကွန်ယက်အားဖွင့်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါငျးတို့သကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးသင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ ငါမှာစကားပြောပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန် နယူးအောက်တိုဘာလတွင် York မြို့, ငါတောင်မှကတည်းကပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြကြောင်းအချို့အသစ်သောကိရိယာများနှင့် Workflows အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့မှမျှော်လင့် NAB ပြရန် နောက်ဆုံးနွေဦး။ ငါသည်လည်းငါတို့များထဲမှ hosting ပါလိမ့်မယ် #GALSNGEAR အဲဒီမှာပြား။
"ငါ့ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာကုမ္ပဏီသုံးခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူတစ်ဦးအဖြစ်, ငါကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့လွယ်ကူမယ့်ငါသိ၏။ ငါသုံးသော့ချက်ဒေသများ၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမျှဝေပါမယ်: သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ကိုယ်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲ, သင်၏အနာဂတ် re-စိတ်ကူးယဉ်။ ဤရွေ့ကားမိမိတို့အ client များအတွက်အလုပ်လုပ်လွန်းအလုပ်များကြောင့်အလုပ်များလွတ်မကြာခဏထောက်ခံမှုလိုအပ်ရှိရာသုံးခုဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အချိန်ယူနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအနှစျနံပါတ်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်နှင့်သင်နောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိရရှိရန်ကြိုးစားနေမှီဝဲနေကြသည်ခံစားရတယ်, သို့မဟုတ်သင်ရုံအလွတ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်နေကြသည်ကြဖွစျစေ, ငါ၏အအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပွုနိုငျအစစ်အမှန် takeaways ပေးပါလိမ့်မယ်။ "
အင်တာဗျူးအနာဂတျအတှကျသူမ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြ DeLouise နှင့်အတူနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ "ငါသည်ပြတိုက်တပ်ဆင်ဘို့ဒီဇိုင်းပါလိမ့်မည်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်ပေါင်းနယ်လှည့်ပြပွဲအကြောင်းကိုသုတစာပေစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကဖွံ့ဖြိုးဆဲခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းကိုကောင်းသောဇာတ်လမ်းပြောပြဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ Archive မီဒီယာ၏ငါ့မေတ္တာလက်ထပ်။ ငါသည်လည်းပဲ Focal စာနယ်ဇင်းအသစ်တစ်ခုစာအုပ်ရေးသားခြင်းပြီးစီး သုတစာပေရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ဗီဒီယိုများတွင်အသံနှင့်ပုံပြင်ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေမြားနှငျ့သံကိုရောနှော Cheryl Ottenritter အတူ။ ဒါက Pre-ရောင်းအားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာမည့်လတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျနော်မကြာမီထွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု "သင်၏ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေးကို run" အကြောင်းကိုအသစ်တစ်ခု LinkedIn တို့သင်ယူသင်တန်းပစ်သတ်။ ငါနေတဲ့နိုင်ငံစုံကော်ပိုရိတ် client ကိုအဓိကထုတ်ကုန်အသစ်ထုတ်လှိမ့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ဘဏ်ဍာအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျဆုံးမြင့်မားတဲ့ဂီယာသို့ပယ်ကန်လိုက်ပါတယ်နှင့်ငါကကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ပုံကိုဖွင့်! "
#GALSNGEAR 2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB Show ကို New York မြို့ မေီ DeLouise ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို တွေအတိုင်းရုပ်ရှင် NAB 2015 NAB 2016 NAB16 nabshow နစ်ဆင်ရုပ်ရှင် ဆူညံသံလျော့ချခြင်း အိုလီဗာကျောက်စာ UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို 2019-10-15
ယခင်: FSR ၏ Smart-Way စနစ်သည် NECA 2019 အတွင်းတွင်ပြပွဲကိုရပ်လိုက်သည်
နောက်တစ်ခု: Switch Media သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးလျင်မြန်စွာစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သော OTT Platform MediaHQ Lite ကိုပြသသည်